Go’aanka Trump: Jerusalem (Caasimad Israel) iyo mowqifka dunida Islaamka – Kasmo Newspaper
Go’aanka Trump: Jerusalem (Caasimad Israel) iyo mowqifka dunida Islaamka
Updated - December 5, 2017 2:12 pm GMT
London (Kasmo), Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) iyo Jaamacadda Carabta ayaa iclaamiyay kulan degdeg ah si looga hortago aqoonsiga Maraykanku damacsanyahay in Qudus ku noqoto caasimadda Israel.
Guddiga Wakiillada joogtada ah ee Ururka Islmaaka oo Isniintii, 4tii Disember 2017, ku shiray Xaruntooda Jeddah, waxay ku baaqeen, in haddii Maraykanku ku dhiirrado go’aankiisa, in shir degdeg ah loogu yeero Wasiirrada Arrimaha Dibadda, ka dibna la qabto kulan guud oo Islaami ah.
Kulanka Jaamacadda Carabtana wuxuu ka socdaa Qaahira maanta oo Talaado ah, 5ta Disember, si looga doodo halista la xiriirta go’aanka Trump. Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta, Axmad Abul-Qait ayaa ka digay cawaaqibka tillaabadan ku yeelan doonto xasilloonida Gobolka iyo guud ahaan dunida.
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa la filayaa in uu go’aanka ku dhawaaqo maalinta Arbacada, 6da Disember 2017, in kasta oo qorshaha wareejinta safaaradda iyo in kale muddadiisii dhacday 2 maalmood ka hor, 4tii Disember, markaas oo ay ku ekeyd sharciyadda Dokumentiga nabadgalyada qaranka.
Laga soo bilaabo 1995, Congress-ka Maraykanka wuxuu dhaqangaliyay Xeerka “Jerusalem Embassy Act” oo qorayay in safaaradda Maraykanka laga raro Tel Aviv, loona raro Jerusalem inta lagu jiro 31ka Disember 1999.
Laakiin iyada oo 6dii biloodba Madaxweynaha hadba talada haya saxiixo dokumentigaas, sharcigu wuxuu awood u siinayaa in tillaabada uu dib u dhigi karo, haddii ay halis galinayso nabadgalyada qaranka.Bill Clinton, George Bush iyo Barack Obama si caadi ah ayay u saxiixeen, xitaa Donald Trump qudhiisa wuxuu saxiixay 1dii Juun ee la soo dhaafay.
Digniinta arrintaan ee ku socota Trump, Carabta ka sokow waxay ka imanaysaa Madaxweyne Erdogan, Madaxweyne Macron iyo guud ahaan Midowga Yurub, Israel-na waxay heegan buuxa galisay ciidammadeeda, iyada oo ka baqaysa mowjado weerarro iyo rabshado ah.
Go’aanka Trump waxaa kale oo ka soo horjeedsaday dalka Urdun iyada oo Wasiirka arrimaha Dibadda, Ayman Safadi, ku wargaliyay Xoghayaha Dibadda, Rex Tillerson, in tillaabadaas ay ka dhalan doonto carada Carabta iyo dunida Islaamka.
Urdun waxay kaalin gaar ah ku leedahay maamulka goobaha barakaysan ee Islaamku ku leeyahay Jerusalem, taas oo loogu aqoonsaday heshiiskii nabadda ee 4tii May 1994 dhexmaray Israel iyo Urdun, arrintaas oo salka ku haysa in, wixii ka horreeyay guushii dagaalkii 6da maalmood ee sannadkii 1967kii Israel ku qabsatay Jerusalem, Urdun gacanta ku haysay qaybta Jerusalem ee Masjidka weyn ku yaallo.